Mac App Store - ကျွန်ုပ်သည် Mac မှပါ ကျွန်ုပ်သည် Mac မှ (စာမျက်နှာ ၄)
Email Signature Unlimited အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့် HTML အီးမေးလ်လက်မှတ်များဖန်တီးခြင်းသည်ဘယ်တော့မျှလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ။
ဤလျှောက်လွှာနှင့်အတူ XPS ဖိုင်များကို PDF သို့ပြောင်းပါ
ကျွန်ုပ်တို့၌ဖိုင်များ XPS ပုံစံရှိသေးသည်ဆိုပါက၎င်းကို PDF ပုံစံသို့ပြောင်းရန်လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုရှာနေပါက XPS သို့ PDF သို့လွယ်ကူလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Clear Day၊ Mac အတွက်အကောင်းဆုံးရာသီဥတုအက်ပ်များထဲမှတစ်ခု
ရာသီဥတုအခြေအနေကိုသင်အမြဲရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ Clear Day သည် Mac App Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
DaisyDisk ကို version 4.6.1 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac App Store တွင်၎င်းအပြင်ဘက်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုသန့်ရှင်းရေးအတွက် application များ၊
Tapbots သည် Tweetbot3ကို Mac အတွက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Mac အတွက် Tweetbot ဗားရှင်းအသစ်သည်လူသိများသောတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သော Tapbots ၏ကြေငြာချက်ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုရင် ...
AutoTyper အပလီကေးရှင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် clipboard မန်နေဂျာထက်စာလျှင်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာကူးယူနိုင်ရန်ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများတွင်စာသားရှည်များကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
ခွေးအရေအတွက်အရအရောင်များ၊ Mac ပေါ်တွင်ပန်းချီသည်ကလေးကစားခြင်းဖြစ်သည်
ဂစ်တာကိုလေ့ကျင့်ပြီး Riffstation ဖြင့်သင်၏ Mac ၌သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသီချင်းများကိုလေ့လာပါ
My PaintBrush Pro သည်အလွှာပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့်ဆွဲကပ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်
My PaintBrush Pro သည်အလွှာအမျိုးမျိုးသောပန်းချီဆွဲခြင်းနှင့်ဆွဲခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများ၊
ပျောက်ကွယ်သွားရန်သတ်မှတ်ထားသည့်အချက်ပြ app မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ အမြဲတမ်းပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ
2Do သည်ဝါသနာပါသော်လည်းပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိုသော Mac အသုံးပြုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
RSS application အသစ်၊ Cappuccino News Reader
Cappuccino News Reader သည် Mac App Store သို့ခေတ်မီ။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောသတင်းဖတ်ရှုသူအဖြစ်လာသည်။ အကြောင်းပါ။
Tembo2ဖြင့်သင်၏ Mac ပေါ်ရှိမည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆိုရှာပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ဖိုင်များရှာရန်အခက်အခဲရှိပါက Tembo2application သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသော application ဖြစ်နိုင်သည်။
iShutdown, သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းသင့် mac ကိုပိတ်ပါ
iShutdown သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အမည်ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောထိုအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်နှင့်ညွှန်ပြအဖြစ် ...
မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမဆို PDF သို့ PDF Converter Star ဖြင့်ပြောင်းပါ
PDF Converter Star application အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ PDF format ဖြင့်မည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆို Word, PowerPoint, Epub, Html, Xml သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Menu Radius သည်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သော Dock ကိုအစားထိုးသည်
အကယ်၍ သင်သည်သမားရိုးကျ Mac Dock နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင် Menu Radius သည်သင်ကြိုးစားသင့်သည်ကိုစဉ်းစားရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏ပုံများကို Super Vectorizer ဖြင့် vector graphics သို့ပြောင်းပါ
Vector ပုံရိပ်များသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်များသည်ဆက်နွယ်နေသောဂျီ ometric မေတြီအရာဝတ္ထုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် segments များ၊ အနားများ၊ မုတ်များ၊ နံရံများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး Cut Pro 10.4.2 ကိုယခု download လုပ်နိုင်ပါပြီ
အက်ပဲလ်ဟာ Final Cut Pro ဗားရှင်းသစ်ကို ၁၀.၄.၂ အထိဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောမူကွဲအသစ်များအနက် ...
Newton Mail ကိုအသစ်ပြန်လည်အီးမေးလ်များကိုမှ function အသစ်တစ်ခုပေးခြင်းကို update လုပ်သည်
Newton သည် output tray ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်သည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်နှင့်အသစ်ပြုပြင်သည်။ ဒီဟာက input tray နဲ့ထပ်တူကျလိမ့်မယ်။
သင်၏ဓါတ်ပုံများမှလူများသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုများကို Inpaint7ဖြင့်ဖျက်ပစ်ပါ
Inpaint7အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် Photoshop သို့မဟုတ် Pixelmator ကဲ့သို့တည်းဖြတ်ခြင်းအသုံးအဆောင်များကိုအသုံးမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများမှမည်သည့်အရာများကိုမဆိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့် screenshots များနှင့်အလုပ်လုပ်ပါက Shotty application သည်၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့အားစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီသောအကောင်းဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Mac App Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမျိုးမျိုးသော application များရှိသည်။ သို့သော်များပြားလှသော ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုအသံဖမ်းယူသောအခါ Quick Recime အစားထိုး Recorder HD
Screen Recorder မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ QuickTime နှင့်၎င်း၏ဝန်လေးသောမီနူးများကိုမသုံးပဲကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့်နောက်ထပ် application တစ်ခုရှိပါသည်။
iFlow မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင် upload နှင့် download speed သည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းလျင်မြန်စွာသိနိုင်သည်။
သင်၏ PDF ဖိုင်တွင် PDF Encryption Star ဖြင့်စကားဝှက်တစ်ခုထည့်ပါ
စာရွက်စာတမ်းများကို PDF format နဲ့အတူတကွထည့်သွင်းလိုပါက PDF Encryption Star သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Super Eraser Pro ဖြင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများမှအရာဝတ္ထုများနှင့် / သို့မဟုတ်လူများကိုလွယ်ကူစွာဖျက်ပစ်ပါ
Super Eraser Pro အပလီကေးရှင်းမှမည်သည့်အရာဝတ္ထုနှင့်လူကိုမဆိုဓာတ်ပုံများမှလျှင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Pretty Clock ဖြင့် menu bar နာရီအရောင်ကိုပြောင်းပါ
အချိန်ကိုပြရန်အပေါ်ဘက်ရှိအထက်ဘားတန်းရှိအနက်ရောင်အစဉ်အလာကိုကျွန်ုပ်တို့ငြီးငွေ့ပါက Pretty Clock ကို အသုံးပြု၍ ရိုးရိုး application တစ်ခုဖြစ်ပြီးအချိန်၏အရောင်ကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာအားလုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရန် Twitterrific ကဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်
နောက်ဆုံးဖြစ်သော Twiterrific for Mac အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းကဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုတိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ခွင့်ပြုသည်
iWork အတွက် GN Templates ကစာမျက်နှာများ၊ နံပါတ်များနှင့် Keynote အတွက်တင်းပလိတ်အလုံး ၃၀၀၀ ကျော်ကိုပေးထားသည်
သင်၏အထူးသို့မဟုတ်နေ့စဉ်စာရွက်စာတမ်းများကို iWork မှတဆင့်ဖန်တီးနိုင်မည့်တင်းပလိတ်များကိုသင်ရှာဖွေနေပါက GN Templates ကမတူညီသောတင်းပလိတ် (၃၀၀၀) ကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။
Business Contact Book ဖြင့်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆက်အသွယ်များကိုစီမံပါ
Business Contact Book လျှောက်လွှာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆက်အသွယ်များကိုကျွမ်းကျင်စွာစီမံနိုင်ပြီးသူတို့နှင့်အတူလုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Super Ninja Boy Run သည်လူကြိုက်များသော Super Mario Run ကို အခြေခံ၍ Mac အတွက်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်
Super Ninja Boy Run သည် Mac သုံးစွဲသူများအတွက်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
MS Excel အတွက် Tutor ဖြင့် Microsoft Excel ၏လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုလေ့လာပါ
Microsoft Excel နှင့်ပတ်သက်သည့်အခြေခံဗဟုသုတနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သောအင်အားအကောင်းဆုံးကိရိယာများကိုလေ့လာခြင်းသည် MS Excel အတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သင်၏ clipboard ကို Copy'em Paste ဖြင့်စီမံပါ
Copy'em Pate သည် clipboard ကိုမြန်ဆန်ရိုးရှင်းပြီးအလွန်အဆင်ပြေသောနည်းဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ပုံများသို့မဟုတ် PDF ကို Overlay ဖြင့်သင်၏ Mac ပေါ်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဘောင်တစ်ခုတွင်ပြပါ
အခြားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြသရန်လိုအပ်ပါက Overlay သည်သင်ရှာဖွေနေသော application ဖြစ်သည်။
သင်၏ vector graphics များကို CAD ပုံစံသို့ CAD Maker ဖြင့်ပြောင်းပါ
CAD Maker application အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် vector graph များဖြင့်ဖိုင်များကို .dwg သို့မဟုတ် .dxf format သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်
သင်၏စီမံကိန်း၏သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို Workspaces နှင့်စုစည်းပါ
Workspace application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုရှာဖွေစရာမလိုဘဲပရောဂျက်နှင့်သက်ဆိုင်သောစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်ကူစွာစီမံနိုင်သည်။
iMedia Player က menu bar မှ YouTube ကိုအလွယ်တကူ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်
iMedia Player ကို အသုံးပြု၍ အင်တာနက်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၌ YouTube ဗီဒီယိုများကို floating window တစ်ခုတွင်ဖွင့်နိုင်သည်။
Vimeo သည် Mac App Store တွင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအဖြစ်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Vimeo ကစားသမား (သို့) လူမှုကွန်ယက်သည်မက်အက်ပလီကေးရှင်းသို့တရားဝင်လျှောက်လွှာအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီးကတည်းကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့သည်။
ယခုသင် Final Cut Pro X 10.4.1, Compressor 4.4.1 နှင့် Motion 5.4.1 ကို download လုပ်ယူနိုင်သည်
နောက်ဆုံး Cut Cut Pro X update အပြင် Compressor နှင့် Motion တို့ကိုပါကတိက ၀ တ်သစ်များဖြင့်အသုံးပြုသူများကိုရရှိနိုင်သည်။
သင်၏မှတ်စုများကို Mac များရှိ FSNotes နှင့်စည်းညှိပါ
FSNotes အပလီကေးရှင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပုံစံကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးသော Markdown ပုံစံကို အသုံးပြု၍ မှတ်စုများကိုလျင်မြန်စွာဖန်တီးနိုင်သည်။
သင်၏ဓါတ်ပုံများကို HEIC မှ JPG သို့ Any HEver Converter ဖြင့်ပြောင်းပါ
HEIC Converter application အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် HEIC format မှပုံများ (သို့) ရုပ်ပုံများကို JPG, JPEG နှင့် PNG သို့လျင်မြန်စွာအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။
timeLAPSE ဖြင့်သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်တွင်ပြသထားသောအရာအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ပါ
timeLAPSE application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မျက်နှာပြင်တွင်ပြသထားသောအရာများကိုအချိန်တိုင်းမှတ်တမ်းတင်နိူင်သည်။
Final Cut Pro X သည်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ProRes RAW အတွက်အထောက်အပံ့ရရှိလိမ့်မည်
Cutပြီလ ၉ ရက်တွင်အက်ပဲလ်သည် Final Cut Pro X အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းသစ်ကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။
iClock PRO၊ သင်၏ desktop အတွက်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောနာရီ
အကယ်၍ သင်သည် Mac Desktop တွင်အချက်ပေးမှုများနှင့်အချိန်ဇုန်များရှိသည့်နာရီကိုရှာနေပါက iClock PRO သည်သင်ရှာဖွေနေသော application ဖြစ်သည်။
Telegram Desktop ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုန့်ပြန်မှုအတွက်ပံ့ပိုးမှုပေးပြီး update လုပ်တယ်
Mac အတွက် Telegram Desktop အက်ပလီကေးရှင်း၏နောက်ဆုံးသတင်းကကျွန်ုပ်တို့ဖြေဆိုလိုသောသတင်းကိုနှစ်ကြိမ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုများကိုအဓိကအသစ်အဆန်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားသည်။
စာမျက်နှာများ, နံပါတ်များနှင့် Keynote အင်္ဂါရပ်အသစ်များအရေအတွက်နှင့်အတူ update လုပ်နေကြသည်
Apple က iWork office suite ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် application အားလုံးကို update ပြုလုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ရပ်၌တင်ပြခဲ့သောသတင်းနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။
Glow Air ဟော်ကီ, ဒီ puck နှင့်အတူပျော်စရာအချိန်ရှိသည်
သင်၏နေ့စဉ်အလုပ်များကို gTasks Pro ဖြင့်စီမံပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကို Mac မှစီမံသောအခါ Mac App Store ရှိအကောင်းဆုံး application များထဲမှတစ်ခုမှာ gTasks Pro ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂျီမေးလ်နှင့်လည်းပေါင်းစည်းနိုင်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Duplicate Finder အပလီကေးရှင်းမှ လွဲ၍ ဖိုင်များကိုအလွယ်တကူအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အလိုလိုသိသောမျက်နှာပြင်ကြောင့်ဖြစ်သည်
Display Menu သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာ၏ resolution ကိုမြန်ဆန်စွာနဲ့အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်
Display Menu အပလီကေးရှင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအပြည့်အဝ macOS မီနူးများထဲသို့ ၀ င်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏ resolution ကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Network Radar နှင့်ပြသနာများအတွက်သင်၏ network တစ်ခုလုံးကိုစစ်ဆေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်ပြtypeနာကိုမဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ Mac App Store မှ Application အမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်သည်။ Network Radas သည်ကျန်သူများ၏အထက်တွင်ရှိနေသည်။
! nstaBro, Instagram ကို Browser ကို။ သင်၏ Instagram အကောင့်ကိုသင်၏ Mac မှရှာဖွေပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှ Instagram အကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အသုံးပြုသူများစွာသည် web မှတိုက်ရိုက်လုပ်သောအရာဖြစ်သည်။ သို့သော် ...
သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုရှာဖွေရန်လျှောက်လွှာအသစ် - ပျံသန်းမှုအဆင့်အတန်းကို tracker
Mac App Store တွင်လေယာဉ်အားလုံး၏စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုနှင့်အခြေအနေအတွက်လျှောက်လွှာအနည်းငယ်ရှိသည်။
ကမ်းလှမ်းမှု၏အားသာချက်ကိုယူပြီးစျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်ဖြင့် Mac အတွက် Tweetbot ကိုဝယ်ပါ
အခုတရားဝင်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကအလုပ်မလုပ်တော့တော့တဲ့နောက်မှာတော့လူကြိုက်များတဲ့ Twitter client ဖြစ်တဲ့ Tapbots ကဒီတနင်္ဂနွေတစ်ဝက်မှာ Tweetbot ဈေးကိုလျှော့ချလိုက်ပြီ။
Mac အတွက်စကားဝှက်ကိုဗားရှင်း ၆.၈.၈ မှအဆင့်မြှင့်တင်ထားပါသည်
ဒီလူကြိုက်များတဲ့ဒီ application ရဲ့ version အသစ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုနဲ့ Mac အတွက်ပါ။ ဤကိစ္စတွင် ...
ငါ့ကို Mac တစ်လုံးဝယ်၊ မင်း Mac မှာစျေးဝယ်စာရင်း
ကျွန်ုပ်၏ Mac နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များတွင်စျေးဝယ်စာရင်းအတွက်အသုံးပြုသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိပါက၎င်းသည် ...
Telegram အတွက် Mac အတွက်တိုးတက်မှုများစွာနှင့် Touch Bar အတွက်အထောက်အပံ့များဖြင့်မွမ်းမံထားသည်
ဤကိစ္စတွင် Telegram application version အသစ်သည်ယခင် version 3.8 မှခုန်။ version 3.7.5 သို့ရောက်ရှိသည်။
Theine၊ ဒီ app ကသင်၏ Mac ကိုအိပ်ပျော်အောင်မသွားစေရန်ကာကွယ်ပေးသည်
Mac App Store တွင် sleep mode သို့မသွားဘဲ Mac ကိုဆက်လက်ထားရှိရန်ခွင့်ပြုထားသော application အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။
Wifiner လျှောက်လွှာကို အသုံးပြု၍ လျင်မြန်ပြီးလွယ်ကူသောဖြေရှင်းနည်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင် Wifi အချက်ပြမှုကိုလျင်မြန်စွာဆန်းစစ်နိုင်သည်။
နောက်ခံရှိ cryptocurrencies သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်ပြက္ခဒိန်2app ကို
အက်ပလီကေးရှင်းသည်ပြက္ခဒိန် ၂ အက်ပလီကေးရှင်းကို Mac App Store မှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်၊ ၎င်းသည်ပရီမီယံရွေးချယ်စရာများကိုသော့ဖွင့်ရန်အတွက် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးစနစ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
Dropshelf အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကွဲပြားသောလမ်းညွှန်များတွင်တည်ရှိသောဖိုင်အမြောက်အများကိုပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစွာမျှဝေရန်လွယ်ကူစွာအုပ်စုဖွဲ့နိုင်သည်။
context menu ရွေးစရာများကို PopClip နှင့်အတူအဆုံးမဲ့နီးပါးအထိချဲ့ပါ
PopClip application မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးချဲ့နိုင်ရန် MacOS ၏ context menu တွင်ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအရေအတွက်ထည့်နိုင်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်အမျိုးအစားများကို Gelatin နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
Gelatin application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကွဲပြားသောဖိုင်များကိုဖိုင်တစ်ခုထဲသို့အလွယ်တကူအလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ လုံးဝအခမဲ့ application တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ Mac တွင် Radium - Perfect Internet Radio ဖြင့်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအသံလွှင့်ဌာနကိုနားထောင်ပါ
Mac ပေါ်ရှိဂီတများကိုနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Mac App Store တွင်အမျိုးမျိုးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ရရှိနိုင်သောအရာများအနက် Radium သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာအမြောက်အမြားကြောင့်အထင်ရှားဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
PhotoStitcher application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော panoramas များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဓာတ်ပုံအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်သည်။
နံပါတ်များအတွက် DesiGN သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်နံပါတ်များအတွက်တင်းပလိတ် ၄၀၀ ကျော်ပေးထားသည်
MacOS နံပါတ်လျှောက်ထားခြင်းအတွက်တင်းပလိတ်များကိုသင်ရှာဖွေနေပါက DesiGN for Numbers သည်သုံးစွဲသူအများစု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်တင်းပလိတ် ၄၀၀ ကျော်ကိုပေးထားသည်။
သင်၏ဗီဒီယိုကလစ်များကို GIF သို့ပြောင်းရန်အခြားကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်
Gifox မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ မည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆို GIF format သို့လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲပြီးကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံး application များနှင့်မျှဝေနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုသိုလှောင်မှု Cloud သို့အလွယ်တကူလွယ်ကူစွာ upload လုပ်နိုင်သည်။
Tweetbot သည် Mac App Store မှယာယီပျောက်ကွယ်သွားပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားသည်
iOS နှင့် Mac အတွက်ကျော်ကြားသော Twitter client ဖြစ်သော Tweetbot ကိုတီထွင်ခဲ့သော Tapbots သည်၎င်း၏အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံး Mac App Store မှပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
သင်၏ဗီဒီယိုအပိုင်းများကို GIF သို့ iGIF Builder နှင့်ပြောင်းပါ
iGIF Builder application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုများကို GIF format သို့မြန်မြန်ပြောင်းနိုင်သည်၊ မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီး၎င်းကို GIF သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည် (သို့) webcam မှတိုက်ရိုက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်
Mini Screen Recorder၊ ကျွန်တော်တို့ Mac ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါ QuickTime ရဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခု
Mini Screen Recorder သည် ၂၈၈၀ x ၁၈၀၀ အထိကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် QickTime နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Note-lfy သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမှတ်စုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖန်တီးခြင်းနှင့် markdown နှင့်လိုက်ဖက်သည်
Markdown အရေးအသားကိုသင်သုံးလေ့ရှိပြီး၎င်းကိုမပါဘဲမနေနိူင်ပါကမှတ်စုများကိုတောင်မှတ်သားခြင်းမရှိလျှင် Note-lfy သည်သင်၏ Mac အတွက်သင်ရှာဖွေနေသော application ဖြစ်သည်။
သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကို Screen Recorder ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပါ၊ အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ရယူပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ဖန်သားပြင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဇာတိလုပ်နိုင်သည် (သို့) Screen Recorder ကဲ့သို့သော third-party application များကိုသုံးနိုင်သည်။
သင့်ကိုယ်ပိုင် GIFs ဖန်တီးရန် Gifski အသစ်လျှောက်လွှာ
Photo Calendar Nature application အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ရက်သတ္တပတ်၏နေ့ရက်တိုင်းကွဲပြားခြားနားသောဓာတ်ပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac desktop ပေါ်တွင်ပြက္ခဒိန်အမြဲတမ်းရှိနေနိုင်သည်။
သင်၏မိသားစုပင်ကို MacFamilyTree 8 ဖြင့်ဖန်တီးပါ
MacOS အတွက် Web Alert အက်ပ်ဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် update ကိုချက်ချင်းသိကျွမ်းပါ
၀ က်ဘ်သတိပေးချက်သည် ၀ က်ဘ်ပေါ်မှပြောင်းလဲမှုများအကြောင်းကြားစာကိုအကြောင်းကြားပေးသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်နောက်ဆက်တွဲလုပ်လိုသည့်အပိုင်းကိုသာဖော်ပြပါ။
MacOS အတွက် Tyme2အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်သင်၏စီမံကိန်းများအတွက်အချိန်ကုန်ဆုံးမှုကိုသိပါ
Tyme2သည်စီမံချက်တစ်ခုစီအတွက်အချိန်သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်ကိုသိရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော application ဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သောစီမံကိန်းများကိုစီစစ်။ PDF သို့တင်ပို့နိုင်သည်။
ပိုက်ဆံ - ဘတ်ဂျက်နှင့်ဘဏ္Financeာရေးသည်ဘက်ပေါင်းစုံ ၀ ယ်ယူမှုများနှင့်အတူအခမဲ့ဖြစ်လာသည်
Mac ပေါ်မှာ Photos အတွက်တရားဝင် extension အက်ပလီကေးရှင်း ၃၃ ခုသာအမှန်တကယ်ရှိသည်
MacOS ရှိ Photos app အတွက်ချဲ့ထွင်မှုများပြုလုပ်သည့် application များ၏စာရင်းကိုကြည့်ပါကလက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုသည် ...
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသော application တစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းကိုအဝတ်လျှော်စက်များတပ်ရန်အလုပ်ကိုလွယ်ကူစေသည်။
အကယ်၍ သင်၏သို့မဟုတ်အခြားဖိုင်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအခါအားလျော်စွာရယူရန်လိုအပ်ပါက၊ Mac အတွက်ရရှိနိုင်သည့်မည်သည့်ဖိုင်အက်ပလီကေးရှင်းမဆိုသင်ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်ရယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်သင်ရှာနေသည့် application ဖြစ်နိုင်သည်။
Word အတွက် Word Converter၊ သင်၏ PDF များကို Word format သို့အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်
ဤကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရနိုင်သောအသုံးအဆောင်များနှင့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သို့သော် ...
သင်၏စာရိုက်ခြင်းကို Type Right ဖြင့်လေ့လာပြီးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါ
ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ကြားခြင်း (သို့) အကယ်ဒမီတွင်စာရိုက်ခြင်းကိုလေ့လာခြင်းသည်ကွန်ပျူတာများနှင့်အလုပ်လုပ်လိုလျှင်၊ စာရေးသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏မြန်နှုန်းကိုမြှင့်တင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလုပ်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။
Tabula သည် Mac App Store တွင်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်
ဂရုတစိုက်နှင့်ရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့် Tabula ကကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိဘဲရေးသားရန်ရိုးရှင်းသည့်အကြံဥာဏ်ကိုပေးသည်။
Pixelmator Pro သည်အမှားအယွင်းများစွာကိုပြုပြင်မွမ်းမံသည်
Pixelmator Pro ၏ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာသည်စတင်မိတ်ဆက်စဉ်ကတည်းကလျှောက်လွှာတင်ခဲ့သောပြproblemsနာအမြောက်အများကိုဖြေရှင်းရန်အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်သည်။
ဆီးချိုရောဂါထိန်းချုပ်မှုအတွက်အချက်အလက်အားလုံးကို DiabetesPal ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ပါ
DiabetesPal မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ iCloud နှင့်ထပ်တူပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone, iPad သို့မဟုတ် Mac မှကျွန်ုပ်တို့၏ဆီးချိုရောဂါဒေတာအားလုံးကိုအမြဲတမ်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
သင်၏အသံမှတ်စုများကို Tab Voice Recorder Pro ဖြင့်အဆင်ပြေစွာမှတ်တမ်းတင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသံမှတ်စုများ၊ စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများ၊ ဆွေးနွေးမှုများ၊ စာသင်ခန်းများသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အခြေအနေမျိုးကိုမဆိုသိမ်းဆည်းလိုပါက၊ သင်ရိုးရိုး application တစ်ခုကိုလိုချင်လျှင် Tab Voice Recorder သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Mactracker က iMac Pro နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များကို၎င်း၏နောက်ဆုံး version 7.7.1 တွင်ထည့်သွင်းထားသည်
၎င်း၏ထုတ်ကုန်များတွင်သတင်းများနှင့်အတူ Mactracker လျှောက်လွှာတစ်ခု update ကိုနောက်တဖန်။ ထိုအ Apple ကိုဖွင့်သည့်အခါတိုင်း ...
PDF ဖိုင်များကို iWork သို့ PDF နှင့် iWork သို့ပြောင်းပါ
PDF မှ iWork အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် PDF ဖိုင်များကို Pages သို့မဟုတ် Keynote သို့အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။
iTunes အတွက် MiniPlay နှင့်အခြားအရာများသည်မည်သည့်သီချင်းကိုဖွင့်ထားသည်နှင့်မည်သည့်သီချင်းကိုဖွင့်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအချိန်မရွေးသိခွင့်ပြုသည်
iTunes အတွက် MiniPplay ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်တော်သီချင်းဖွင့်ထားသောသီချင်း၏အမည်မှာမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသိရှိနိုင်ပြီး iTunes သို့မဟုတ် Spotify ကိုကြည့်စရာမလိုဘဲပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်
DaisyDisk ကို ၂၄ နာရီရောင်းသည်
၎င်းသည်ကျွန်တော် Mac တွင်ယခင်ကပြောခဲ့ဖူးသောထို application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ GIF နှင့်ရုပ်ပုံများကို Atsumeru ဖြင့်စီမံပြီးစီမံပါ
Atsumeru ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လွယ်ကူစွာရှာဖွေရန်တံဆိပ်များထည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများကိုလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုအလျင်အမြန်အလွယ်တကူကြည့်ရှုရန်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်၊ သင် Finder နှင့် Preview ကိုငြီးငွေ့မည်ဆိုလျှင် ViewPic သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်
SomaFM သည်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်သောဂီတကို Mac မှခံစားရန်ခွင့်ပြုသည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအင်တာနက်ပေါ်မှထုတ်လွှင့်သောမည်သည့်အသံလွှင့်ဌာနကိုမဆိုနားထောင်နိုင်သည့် application တစ်ခုအကြောင်းပြောခဲ့သည်။
Apple က iOS နှင့် Mac အတွက် App Store ၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းထုတ်သည်
အက်ပလီကေးရှင်းသည်၎င်း၏ ၀ က်ဘ်ဗားရှင်းတွင် App Store မျက်နှာပြင်ကိုတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ၎င်းသည် iTunes ဒီဇိုင်းဟောင်းမှရွေ့သွားပြီး iOS App Store ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်
InstaCal၊ သင်၏ Mac အတွက်ပြက္ခဒိန် menu menu တွင်ရှိသည်
InstaCal သည်ရိုးရှင်းသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်၏ Mac ၏ menu bar မှသင်အသုံးပြုသောပြက္ခဒိန်အားလုံးကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုသည်။
Chinese Checkers Master နှင့်အတူသင့် Mac တွင်တရုတ် Checkers ကိုဖွင့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်တရုတ်ချက်စက်များကိုခံစားကြည့်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ တရုတ်စစ်ဆေးသူများမာစတာဂိမ်းကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာကစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်
သင့်ဓာတ်ပုံများ၏နောက်ခံကို PicFocus ဖြင့်ပြုပြင်ပါ
CryptoCap, သင်၏ cryptocurrencies ၏တန်ဖိုးနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လျှောက်လွှာအသစ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြား cryptocurrencies များအနက်လူသိများသော bitcoins, နယူး, ဂယက်ထ, Stella, Dash သို့မဟုတ် Ethereum အခါ ...
Fantastical2ကိုတိုးတက်မှုများစွာနှင့်အတူဗားရှင်း 2.4.5 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
ဤအချက်တွင် Fantastical2ကိုတင်ပြခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်မတန်သောအရာဖြစ်သည်။
Bulk Photo Watermark ဖြင့်သင်၏ပုံတွင်ပူးတွဲရေစာထည့်ပါ
Bulk Photo Watermak application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုလူမှုရေးကွန်ယက်များပေါ်တွင်မျှဝေခြင်း (သို့) အင်တာနက်သို့ upload မလုပ်မီကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံများသို့ရေစာအမျိုးအစားတစ်ခုခုကိုပူးတွဲထည့်နိုင်သည်။
Screenshot Capture ဖြင့် PSD format ဖြင့် screenshots များကိုယူပါ
Screenshot Capture အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် Photoshop PSD ပုံစံဖြင့်ဖန်သားပြင်များကိုလျင်မြန်စွာအလွယ်တကူယူနိုင်သည်။
Optimal Layout သည် Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ဖြစ်သည်
Optimal Layout ဖြင့်သင်၏ Mac သည်သင်နှစ်သက်သလိုအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီ desktop manager ကသင့်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
Aquarelo သည် Mac အတွက်အရောင်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော app ဖြစ်သည်
သင်ကဒီဇိုင်နာလား၊ ဝဘ်တီထွင်သူလား။ သင်ဤအရောင်နှင့်အရောင်များနှင့်၎င်းတို့ကုဒ်များကိုပိုမိုအဆင်ပြေသောနည်းဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ Aquarelo အကြောင်းပါ
Weather 24 Bar Forecast 5၊ ရာသီဥတုကိုစစ်ဆေးရန်လျှောက်လွှာအသစ်တစ်ခု
နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကလိုက်ခဲ့ကြသူတွေအားလုံးဟာမိုးလေ ၀ သဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအသုံးချမှုအချို့ကိုသိကြပါတယ်။
အသံမှတ်စုများကိုအသံဖမ်းယူပြီး Auditory နှင့်စာရေးခြင်းကိုနှစ်သက်ပါ
Resize Expert နှင့်အတူဖိုင်များကို Rename နှင့် resize လုပ်ပါ
Resize Expert application အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အတူတူနာမည်ပြောင်းဖို့ခွင့်ပြုခြင်းအပြင်ဓာတ်ပုံအရွယ်အစားကိုအတူတကွပြောင်းလဲနိုင်သည်။
သင်၏ဖိုင်များကို PDF မှ PowerPoint ပုံစံသို့ဤ PDF ဖြင့် PowerPoint Converter သို့ပြောင်းပါ
ဖိုင်တစ်ခုကို PDF format ဖြင့် PowerPoint သို့ကူးပြောင်းခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း application နှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာလိမ့်မည်။
Translatium - ဘာသာပြန်သူ၊ Mac App Store တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
စာသားကိုချက်ချင်းဘာသာပြန်ရန်ခွင့်ပြုသည့် application များစွာရှိပါသည်။
OneRadio ဖြင့်သင်၏ Mac မှရေဒီယိုကိုခံစားပါ
OneRadio အပလီကေးရှင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရရှိနိုင်သည့်ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံမှအကန့်အသတ်မဲ့ဂီတကိုကျွန်ုပ်တို့နားထောင်နိုင်သည်။
Telegram ကို version 3.7.2 သို့အမှောင်ပြင်နှင့်အခြားတိုးတက်မှုများဖြင့်အဆင့်မြှင့်ထားသည်
Mac အတွက် Telegram application သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များနှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်သောအချို့သော interface များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ဗွီဒီယိုများကို GIF သို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ Puppetry Gif Maker ဖြင့်ပြောင်းပါ
၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် GIF ပုံစံကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊
Detexif Exif Viewer သည်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံများ၏ EXIF ​​အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည်
Detexif Exif Viewer အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဒေတာများကိုလျင်မြန်စွာအဆင်ပြေစွာရယူနိုင်သည်။
Word Puzzle Quiz ဂိမ်း၊ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများကိုကစားခြင်းဖြင့်သင်ယူပါ
ထို့အပြင်ဘာသာစကားများကိုသင်ယူခြင်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းပြီးအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်လျှင် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။ ဒီဂိမ်းအသစ်က ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac, Tomatoes Time Management နှင့်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးထားသော application သည်အသစ်တစ်ခုကိုရရှိသည်။
Telegram Desktop ကိုကျွန်ုပ်တို့မျှဝေထားသောပုံရိပ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်
Telegram Desktop ကို Mac အတွက်၎င်း၏ဗားရှင်းတွင်အသစ်တင်ပြီးရုပ်ပုံများကိုဝေမျှသည့်အခါအယ်လ်ဘမ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
မိတ္တူကူးထားသောဖိုင်များကို Gemini 2: Duplicate Finder ဖြင့်သင်၏ Mac မှဖယ်ရှားပါ
မိတ္တူပွားထားသောဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပယ်ဖျက်လိုပါက Gemini2သည် Mac App Store တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
သင်၏ Mac Disk မှ PRO Disk Cleaner ဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
PRO Disk Cleaner မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံး Mac ကဲ့သို့ပြန်လည်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင်ပြင်းထန်သောသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Reddit ကဏ္sectionsများကို Reddit News အက်ပ်ဖြင့်စစ်ဆေးပါ
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံး Reddit ချည်များကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် Reddit News အက်ပလီကေးရှင်းအားအလွယ်တကူလွယ်ကူစေသည်
Time Lapse Photography နှင့်အတူကြီးမားသော Time Lapse ဗီဒီယိုကိုဖန်တီးပါ
Time Lapse application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ နောက်ဆုံးဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်အပိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်းရိုက်ခဲ့သောဓာတ်ပုံများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းနိုင်သည်
သင်ခရစ်စမတ်နှင့်၎င်းကိုကိုယ်စားပြုသောအရာအားလုံးကိုကြိုက်လျှင် Xmas snow သည်သင်၏လျှောက်လွှာဖြစ်သည်
သင်သည်ခရစ်စမတ်ကိုနှစ်သက်ပြီး၎င်းအားဆီးနှင်းကြည့်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်ဆိုပါက Xmas snow application သည်ဤရာသီကိုသင်နှစ်သက်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ Mac ကိုအလိုရှိသူသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုအချိန်မရွေးထိန်းချုပ်ပါ
Selfie အက်ပလီကေးရှင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မရှိခြင်းကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကို ၀ င်ရောက်လိုသူကိုအချိန်တိုင်းသိနိုင်ပါသည်။
နေ့လည်စာအတွက်ဘာတွေရှိလဲမသိဘူးလား။ Paprika Recipe Manager3သည်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်
Paprika Recipe Manager3လျှောက်လွှာအားကျေးဇူးတင်ရသော်၊ ချက်ခြင်းအသစ်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းအပြင်မိသားစု၏ချက်ပြုတ်မှုများကိုအမြဲတမ်းရရှိနိုင်သည်။
Mac အတွက်ဂဏန်းတွက်စက်တစ်ခုထက်ပိုသော PCalc သည်အချိန်အကန့်အသတ်နှင့်သာရောင်းရသည်
PCalc သိပ္ပံဂဏန်းတွက်စက်ကို Ac Ac Store တွင်ယူအက်စ်တစ်ယူနစ်လျှင် ၉ ဒေါ်လာယူရိုထက်နိမ့်သောအချိန်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
PhotoScape X ကို HEVC၊ ကိရိယာအသစ်များနှင့်စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်အထောက်အပံ့ဖြင့်မွမ်းမံသည်
Mac, PhotoScape X အတွက် HEIC နှင့် HEVC နှင့် filter အသစ်များနှင့် function အသစ်များအတွက်ဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန် application ကို update လုပ်ခဲ့သည်
1 စကားဝှက်ကို Mac အတွက်ဗားရှင်း 6.8.5 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကစတင်ခဲ့သောနောက်ဆုံးရရှိနိုင်သော 1Password ဗားရှင်းသည် v6.8.5 ဖြစ်ပြီးစီးရီးတစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းထည့်သည်။
ဒီနေရာမှာ Final Cut Pro X 10.4 မှာလူသိနည်းသေးတဲ့အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်
အရောင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပရောဂျက်ဖန်တီးခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့် Final Cut Pro X 10.4 မွမ်းမံခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည့်အင်္ဂါရပ်အသစ်အချို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
Deliveries အက်ပလီကေးရှင်း - အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာလျှော့ထားသော package tracker
တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသုံးဝင်သော application တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်းအထူးသဖြင့်ယခုသူတို့သည်ပါတီများဖြစ်သောကြောင့် ...
သင်၏ပုံများကို Annotate နှင့်အလွယ်တကူဖမ်းယူတည်းဖြတ်ပါ
Annotate - Capture and Share အက်ပလီကေးရှင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စာများ၊ ပုံများထည့်ခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူမျှဝေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်
စာရေးသူ - Liquid နှင့်ရေးသားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်
အဆိုပါအရည် application | စာရေးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်ကူစွာနှင့်စိတ်ပျံ့လွင့်စရာများမရှိဘဲရေးသားခြင်းကိုပျော်မွေ့ရန်ခွင့်ပြုသည်
သင်နှစ်သက်သောဓာတ်ပုံများကို FastConverter2နှင့်တည်းဖြတ်ပါ
FastConverter2အက်ပလီကေးရှင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများနှင့်အမြန်အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်သောအမြောက်အမြားကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Logic Pro X ကို iMac Pro ရောက်ရှိခြင်းနှင့်လည်း update ပြုလုပ်သည်
Logic Pro X သည် 36-core iMac Pro အသစ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန် update ကိုရရှိသည်။ ၎င်းသည် High Sierra အတွက်ပထမဆုံးသောအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
အရာ (၃) ကိုအက်ပ်တွင်အလုပ်များထည့်ရန်နည်းသစ်ကိုထည့်ခြင်းဖြင့်အသစ်ပြောင်းသည်
The Things3၏တာဝန်မန်နေဂျာသည်ယခုအခါနေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်အတွက်တိုးတက်မှုများကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီးပါပြီ။
Final Cut Pro X version 10.4 ကိုယခု Virtual Reality editing နှင့် 8k တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
၃၆၀ ဒီဂရီဗီဒီယိုများ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်တင်များနှင့် HDR ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည့် Final Cut Pro X 10.4 update ကိုရရှိသည်
ငါတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုဒိုင်ယာရီရေးချင်တယ်ဆိုရင် DateBook ကဒီအလုပ်ကသင်ထင်ထားတာထက်အများကြီးပိုလွယ်တယ်။
Mac အတွက် Djay Pro2သည်အတတ်ပညာကို အသုံးပြု၍ ပုဒ်များကိုရောနှောသည်
ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အတုထောက်လှမ်းမှုကြောင့်သီချင်းများကိုရောနှောရန်၎င်း၏အဓိကအသစ်အဆန်းဖြစ်သော Automix လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သော Djay Pro ၏ဗားရှင်း ၂ ကိုသိရှိကြသည်။
File Multi Tool6ဖြင့်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်များ၏ဖန်တီးမှုရက်စွဲကိုပြုပြင်ပါ
လျှောက်လွှာကို ကျေးဇူးတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံရိပ်များ၏တီထွင်မှုနေ့စွဲကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Final Cut Pro အသစ် update အသစ်ကျလာပါပြီ
ကြာရှည်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသော Final Cut Pro X ၏နောက်ဆုံးသတင်းသည် iMac Pro နှင့်အတူစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိရန်စီစဉ်ထားပုံရသည်။
မည်သည့်ဗီဒီယိုကိုမဆို Hang နှင့်အတူ floating window တစ်ခုသို့ပို့ပါ
ရိုးရှင်းသော Hang application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပြသထားသောမည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆိုရေပေါ်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုသို့ပို့နိုင်သည်။
သင်၏ MacBook ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကို BatteryTruth ဖြင့်စောင့်ကြည့်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်တိုင်းသိလိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘက်ထရီ၏အခြေအနေနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံသည် BatteryTruth ဖြင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
Screen IT မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် third-party application များဖွင့်စရာမလိုပဲ screenshots များယူပြီးလျင်မြန်စွာပြင်ဆင်နိုင်သည်
Windows အတွက်ပုံတူပွားခြင်း၊ Mac အတွက်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ဖြစ်သည်
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏စာရွက်စာတမ်းများ၏လုံခြုံရေးကိုများစွာစဉ်းစားသောသူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုမည်သူမဆိုမဖတ်စေလိုလျှင် ...
HD Cleaner၊ ဒီ application နှင့်သင်၏ hard drive ပေါ်တွင်နေရာလွတ်ပေးပါ
အကယ်၍ သင်သည် "ချက်ပြုတ်သူ" ဖြစ်ပါက Recipe Keeper အသစ်သည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်
Recipe Keeper သည် application အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး Mac application store တွင်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ရရှိနိုင် ...
Mac App Store သည် App Store ကဲ့သို့သော“ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” ကိုမရရှိသေးသည့်နောက်ထပ်သက်သေတစ်ခု
ထို့အပြင်သုံးစွဲသူများစွာသည် Mac application store ရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားကြပြီးဖြစ်သည်။
Telegram ကိုမြောက်မြားစွာနှင့်အရေးကြီးသောသတင်းများနှင့်အတူ update လုပ်ဖြစ်ပါတယ်
Telegram 3.6 ဗားရှင်းသစ်ကိုယခုအခါရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်၍ အက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုသူများအတွက်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုများကိုထည့်သွင်းထားသည်။
သင်၏ဗွီဒီယိုများကိုအခြား MOV Converter ဖြင့်အခြားပုံစံများသို့ပြောင်းပါ
Any MOV Converter application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မည်သည့်ဗီဒီယိုဖိုင်မဆို MOV format ဖြင့်မည်သည့် format ကိုမဆိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Pixelmator Pro ကိုရက် ၃၀ အခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ရပြီးလူတိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်
Pixelmator Pro ၏ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုတရားဝင်ဖြန့်ချိသည့်နေ့သည်နောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
သငျသညျ ClassicWeather နှင့်အတူမထွက်ခင်ရာသီဥတုစစ်ဆေးပါ
ClassicWeather မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လာမည့် ၁၀ ရက်အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုချင်းစီကိုမထွက်ခွာမီရာသီဥတုသည်အစဉ်အမြဲသိရှိနိုင်သည်။
Copied နှင့်အတူ clipboard ၏အများဆုံးလုပ်ပါ
clipboard ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် Mac App Store တွင်မတူညီသော application များကိုရှာနိုင်သည်။ ဒီနေ့ Copied အကြောင်းပြောနေတာ၊ အဲဒါကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ app ပါ။
Just Press Record နှင့်သင်၏မှတ်တမ်းများအားလုံးနှင့်နီးကပ်စွာထားပါ
Just Press Record application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အသံသွင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာ၌မဆိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ hard drive နေရာကို DaisyDisk ဖြင့်စျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်သာစီမံပြီးစီမံခန့်ခွဲပါ
DaisyDisk အပလီကေးရှင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ hard disk ပေါ်ရှိနေရာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်သောအမြင်ဖြင့်စီမံနိုင်သည်။
Machinarium ဂိမ်းကိုယူရို ၃.၄၉ ဖြင့်သာရနိုင်သည်
Mac အတွက်ဂန္တ ၀ င်နှင့်အခြားပလက်ဖောင်းများဖြစ်သော Machinarium ကိုမူရင်းစျေးနှုန်းနှင့်သိသိသာသာလျှော့စျေးဖြင့် Mac App Store တွင်ရနိုင်သည်။
များစွာသောလက်တဆုပ်စာ developer များသည် Black Friday လျှော့စျေးစည်းရုံးရေးတွင်ပါ ၀ င်နေသည်။
Paste 2, စျေးနှုန်းထက်ဝက်ခန့်ကန့်သတ်စျေးနှုန်းမှာစိတ်ကူး clipboard မန်နေဂျာ
Paste2application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ clipboard မှသတင်းအချက်အလက်အမြဲတမ်းရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်
ဖဲကြိုးနောက်ခံနာရီ, နာရီကဲ့သို့နောက်ခံပုံ app တစ်ခု
နံရံကပ်နံရံကပ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုအတွက် Mac App Store ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေပါကလျှောက်လွှာအရေအတွက် ...
iFoto Montage ဖြင့်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်များကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်သာရောင်းချပါ
iFoto Montage အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်စာကြည့်တိုက်ကို သုံး၍ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုရရှိနိုင်သည်
Mac App Store တွင် Fantastical2အချိန်ကန့်သတ်ချက်ရှိသောကမ်းလှမ်းမှု
Mac အတွက် Fantastical2အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းသည် version 2.4.4 ဖြစ်ပြီးအပြောင်းအလဲအနည်းငယ်ကိုသာဖြည့်စွက်သည်။
Pixelmator သည်၎င်း၏စျေးနှုန်းကို Mac နှင့် iOS အတွက်အသုံးပြုသည်
အကယ်၍ သင်သည် Mac App Store သို့သွားပြီး Pixelmator ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းလျှောက်လွှာကိုရှာပါက၎င်းကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။
မည်သည့်ဗွီဒီယိုအမျိုးအစားကိုမဆို iFunia Video Converter ဖြင့်ပြောင်းပါ
iFunia Video Converter သည်အမျိုးအစား ၁၀၀ ကျော်သောကိုင်တွယ်ရသောသုံးရလွယ်ကူသောဗီဒီယိုပြောင်းစက်ဖြစ်သည်။
Meet Tempad, macOS အတွက်ဗီတာမင်မှတ်စုလျှောက်လွှာ
Tempad သည် macOS အတွက်မှတ်စုလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ Cloud တွင်ရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် iOS အတွက် application တစ်ခုရှိပြီး markdown ပုံစံကိုခွင့်ပြုသည်။
နောက်ခံမှုန်ဝါးကိုသင်၏ဓါတ်ပုံများသို့ After Focus ဖြင့်ထည့်ပါ
After Focus application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Bokeh effect ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်သည်။
FileZilla Pro၊ အကောင်းဆုံး FTP client သည် macOS တွင်ရှိသည်
FTP client ကိုမက်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးတွင်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းသောသတင်း ... များစွာသောလျှောက်လွှာပုံစံ ...
သင်၏ဓါတ်ပုံများကို Filter for Photos အက်ပ်ဖြင့်တိုးချဲ့ပါ
Filter for Photos application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်များကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များကိုပေးသောအလုအယက်စစ်ထုတ်စက်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Proton Weather, ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှရာသီဥတုကိုစစ်ဆေးရန်နည်းလမ်းသစ်
Proton Weather application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိရာသီဥတုနှင့်လာမည့် ၃ ရက်အတွက်ခန့်မှန်းခြင်းကိုအမြဲတမ်းသိနိုင်သည်။
ZipSplit application မှ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့် application ကိုမဆိုဖိုင်ငယ်များအဖြစ် ခွဲ၍ ရနိုင်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့အားအီးမေးလ်ဖြင့်ဝေမျှနိုင်သည်
Downcast ဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော podcasts များကိုခံစားပါ
သင်၏ Mac ၌သင်အကြိုက်ဆုံး podcasts များကိုနှစ်သက်လိုပါက Downcast သည် Mac App Store တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Mac Capture & Recorder ဖြင့်သင်၏ Mac မျက်နှာပြင်ကိုအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာမှတ်တမ်းတင်ပါ
Screen Capture & Recorder မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မျက်နှာပြင်တွင်ပြသထားသောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
မင်း Mac မှာ Koi ရေကန်တစ်ခုရှိလား။ Koi Pond 3D ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်
Mac App Store မှ Application မ်ားကိုတွေ့ရပြီး၎င်းတို့အနက်မှအချို့သည်နည်းနည်းလေးမှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီမေးလ်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ကွဲပြားသော client တစ်ခုဖြစ်သောဂျီမေးလ်ကိုသွားပါ
G for Gmail အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘယ်အချိန်မဆို browser ကိုသုံးစရာမလိုပဲဂူဂဲလ်အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးပြီးစီမံနိုင်ပါတယ်။
သင်အကြိုက်ဆုံးပုံများကို Sketch n Cartoonize ဖြင့်ပုံဆွဲပါ
Sketch n Cartoonize အက်ပလီကေးရှင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံများကိုစိတ်ကူးကောင်းသောပုံများအဖြစ်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်
Time Zone Converter နှင့် Clock သည်ကမ္ဘာ့အချိန်ဇယားအတိုင်းသိသည်
Time Zone Converter and Clock သည် macOS များအတွက် application ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အချိန်ဇုန်များ၌သင့်ကိုသတင်းပို့ခြင်းကိုဂရုပြုပါသည်
သင်၏ clipboard သမိုင်းကိုအလျင်အမြန်လွယ်ကူစွာစီမံပါ
Copy Clipboard History application မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ clipboard ၏သမိုင်းကိုလက်တလော၌ရှိနိုင်ပြီး၎င်းကိုကွဲပြားသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုံစံများဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်
WhatsApp Desktop ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီး High Sierra နှင့်အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သည်
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ Mac App Store သို့အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်တစ်ခုရောက်လာသည်။ လျှောက်လွှာအကြောင်းပါ။
Koi Pond 3D ဖြင့်နောက်ခံပုံတစ်ခုအနေဖြင့်ငါးကန်တစ်ခုထားပါ
Koi Pond 3D အပလီကေးရှင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac အတွက်ဖန်သားပြင်ဖန်သားပြင်တစ်ခုသို့မဟုတ် desktop နောက်ခံအဖြစ် Koi ငါးကန်တစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည်။
နံပါတ်များ၊ စာမျက်နှာများနှင့် Mac အတွက် Keynote အသစ်ပြောင်းလဲခြင်း
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် Apple နံပါတ်များ၊ စာမျက်နှာများနှင့် Keynote suite ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်သည်။ ဤဗားရှင်းအသစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုကိုမတွေ့ပါ။
Image Enhance Pro ဖြင့်သင်၏ပုံများကို HDR သို့ပြောင်းပါ
Image Enhance Pro အပလီကေးရှင်းမှကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်နိုင်ပြီးမြင့်မားသော dynamic range (HDR) ပုံများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်
Twiterrific နှင့် Tweetbot သည်ယခုအချိန်တွင်စာလုံးရေ ၂၈၀ တင်ပို့သည်
Mac အတွက်အဓိကတွစ်တာအက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုသည်အသစ်စက်စက်မွမ်းမံထားပြီးစာလုံး ၂၈၀ ကိုထောက်ပံ့ပေးထားသည်
နောက်ခံ ၂၅၀၀၀ ကျော်ကိုနောက်ခံ ၂၅၀၀၀ ကျော်ဖြင့် desktop ကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ
Wallpaper Wizard2အပလီကေးရှင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်း၏စာကြည့်တိုက်မှပုံရိပ် ၂၅၀၀၀ ကျော်ကြောင့်နေ့စဉ်နောက်ခံများကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်
Weather Pro သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြည့်စွက်ပြီး၊
Mac App Store တွင်မိုးလေ ၀ သနှင့်သက်ဆိုင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များစွာကိုတွေ့ရပြီး၊
Twitterrific5သည်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုဆက်လက်ဖြည့်စွက်ပြီးဆက်လက်ထည့်သွင်းထားသည်
Twitterrific5သည်အသစ်အဆန်းအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၊ စစ်တမ်းများ၊ တုန့်ပြန်မှုများနှင့် browser များအပြန်အလှန်တိုးတက်မှုများပါဝင်သည်။
Pixelmator Pro သည်နို ၀ င်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် Mac App Store သို့ရောက်ရှိလာသည်
လပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးနောက် Pixelmator ၏ developer သည်နို ၀ င်ဘာ ၂၉ တွင် Pro version ကိုကြေငြာခဲ့သည်။
Boxy သည် Gmail အတွက်သီးသန့်အီးမေးလ်ဂလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Boxy သည်ဂျီမေးလ်အတွက်သီးသန့်အီးမေးလ်ဂလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘရောက်ဇာကိုအသုံးမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များကိုစီမံရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
Money Pro သည် macOS High Sierra နှင့်လိုက်ဖက်ညီစေရန်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
ထို့အပြင်၎င်းသည်ထူးဆန်းနေပုံရသော်လည်း operating system အသစ်နှင့်မကိုက်ညီသော application အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနေပါသည်။
EXIFPurge ဖြင့်သင်၏ဓါတ်ပုံများမှ metadata များကိုဖယ်ရှားပါ
EXIFPurge အပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် EXIF ​​metadata များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများမှလျင်မြန်စွာဖယ်ရှားနိုင်ပြီးတတိယပါတီများနှင့်မျှဝေမည်မဟုတ်ပါ။
သင်၏ Wifi ကိုမည်သူအသုံးပြုနေသည်ကိုအမြဲတမ်းသိပါ
ကျွန်ုပ်၏ Wifi လျှောက်လွှာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်သွယ်မှုမြန်နှုန်းပြproblemsနာများသည်ကျူးကျော်သူတစ် ဦး ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အချိန်မရွေးသိနိုင်သည်။
Spotica Menu ဖြင့် Spotify ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ပါ
Spotica Menu အပလီကေးရှင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏ထိပ်မီနူးဘားမှတိုက်ရိုက် Spotify စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ပါသည်။
Gmail အတွက် Kiwi, လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါသော Gmail အတွက် mail client
အကယ်၍ သင်သည်ဂျီမေးလ်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အီးမေးလ်ဂလိုင်းတစ်ခုရှာနေသည်ဆိုလျှင် Kiwi for Gmail သည်စျေးကွက်တွင်ရှာဖွေနိုင်သောအကောင်းဆုံး application ဖြစ်သည်။
Desktop App များကို Re: Desktop ဖြင့်အမြန်ဖုံးကွယ်ပါ
Re-Desktop အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ အက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုမြန်ဆန်စွာနဲ့အလွယ်တကူဖုံးကွယ်နိုင်သည်။
Affinity Photo and Affinity Designer ၏နောက်ဆုံးသတင်းများသည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ပါဝင်နိုင်သည်
Affinity Photo and Designer ၏သတင်းနှင့်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပသတင်းများအပြင်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ပါဝင်နိုင်သည်။
သင်၏ပုံများကိုသို့မဟုတ် ISO ဖိုင်ကို DVD ထဲသို့ Next7 DVD Creator Pro ဖြင့်ကူးယူပါ
Netx7 DVD Creator Pro အပလီကေးရှင်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်ဖိုင်များကို ISO format ဖြင့် DVD ပေါ်တွင်လျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူကူးယူနိုင်သည်။
သင်၏ဓါတ်ပုံများကို Fhotoroom X နှင့်တည်းဖြတ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံများကိုတည်းဖြတ်လိုပါက Fhotoroom X သည်ရွေးချယ်စရာများစွာနှင့်လွယ်ကူသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Forecast Bar သည်တိုးတက်မှုမြောက်မြားစွာနှင့်အတူဗားရှင်း 3.0.3 အသစ်ကိုရရှိသည်
Multi Tool, ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းအတွက် application အသစ်
ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထိတွေ့ခြင်းအတွက်အထူးသီးသန့်ထားရှိသည့် application အသစ်ကို Mac App Store တွင်၎င်း၊
သင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်အသုတ်ချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အကောင်းဆုံးသော PhotoBulk2နှင့်တွေ့ဆုံပါ
PhotoBulk2သည်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတည်းဖြတ်ရန်နှင့်ပြုပြင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော application တစ်ခုဖြစ်ပြီး watermarks နှင့်ဓာတ်ပုံ၏အရွယ်အစားဖြစ်သည်။
Logoist application, Logoist, သည်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများအသစ်များဖြင့်၎င်း၏တတိယမြောက် version ကိုယခုအချိန်အထိရောက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
Perfect Face - ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများတွင်မစုံလင်မှုများကိုတည်းဖြတ်ရန်အပလီကေးရှင်းတစ်ခု
Perfect Face၊ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာဓါတ်ပုံများကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဥပမာအားဖြင့် ...